Qaybta 1. 20 mushaarka ugu badan Android Games
Qaybta 2. 10 Best Free Bixiyay Android Games
Lacag Android Games
Games waa mid ka mid ah kuwa hawlaha oo afaysto iyo bedelo maskaxda dadka. Kuwaas waxaa loogu yeedhi karaa hawlaha maskaxda ku soo fool. Kulan Android mushaarka badan yihiin kuwa kulan oo lagu ciyaaray ka dib bixinta qadarka go'an. Waxay yihiin kulan la naqshadeynta tayada kacsantahay in captivate ciyaaryahan laaban ciyaarta. Waxay ka mid ah kulamada ugu ciyaari dukaanka play la derajada fiican Google iyo qiimeysaa yihiin. Waxay leedahay mid ka mid ah shabakadaha ugu horeeysa dunida dacaladeeda, iyada oo tirada ugu fog oo downloads. Waxay leeyihiin tiro ugu badan ee heerarka la ayeey ka adag. Marka la soo koobo, kulan ka bixisay waa kulan ee ugu fiicnaa iibinta ee dunida oo dhan.
1. Modern dagaalanka 5
Modern dagaalanka 5 waa mid ka mid ah hogaanka bixisay kulan android. Waa mid ka mid ah siyaalaha cusub ee qofka taxanaha Shooter hore ee Dagaalka casriga ah. Waxaa cadaynaysaa aad muuqaallo kale oo tayo sare leh, kulan play farxad leh, on-line multi-ciyaaryahan, iyo olole ciyaaryahanka kaliya. Waxaa jira wax badan oo ka mid ah content halkan si aad u heshid iyo ku dhiirigelinayaan in uu dhawaan ka hor tagtay oo ka dhigay ciyaarta horyaalka ah oo lacag la'aan ah.
The taxane NOVA waa mid ka mid ah kulan android ugu mushaarka badan. Kulan taxane Tani waa ka sii Shooter hore shaqsi in xawilaadda dhimateen waxyaalaha ka xiiso badan. Fikirka waxaa ka mid ah sida Halo la dagaallanka casriga ah ee Call of Duty by la barbardhigo. Kulankaan ayaa waxa uu naqshadeynta grand, hababka on-line multi-ciyaaryahan, hab xilli 10-shaqada, iyo in ka badan. Sheekadu waa dhab ahaantii racfaan hufan iyo kulan on-line multi-ciyaaryahan ku yeelan karaan ilaa 12 ciyaaryahan oo toddobada noocyada ciyaarta matchmaking kala duwan.
3. Xatooyo Grand Auto
GTA waa ciyaarta ugu mushaarka android. Waa pre-addoonsada, naqshadeynta-xallinta sare uga dhisay si cad u Kobcinta nalalka tirinta mobile, an palette midab la xoojiyey oo lagu daydo qof hagaagtay. Kontaroolada ul analogga Dual u camera buuxa oo ay gacanta ku dhaq. Waxaa la dhexgeliyey saamaynta taabashada xiiso leh.
Waa mid ka mid ah kuwa ugu xaashaa kulan fiican. Waxaad uun tahay hal talaabo meel ka baxsan dunida ka mid ah argaggax leh.
Masaxay ku dhuftay maamulka booska markii ay soo baxday horraantii 2015, waxaana haatan mid ka mid ah ugu jecel oo ay xaman jireen ah oo ku saabsan kulan ee sanadka. Waxaan ciyaari yar raadinaya walaashayo in cabsi leh, adduunka ugu maqlaan jirey. Qorshahaa waxa madow iyo caddaan jeeda hysterics ambiance ka flawlessly iyo si fudud waa mid ka mid ah kulamada ugu wanaagsan loogu talagalay 2015. Sheekadu waa ilbax ah oo ah farsamo ciyaar ciyaar adag yihiin.
Machinarium ahaa mid ka mid ah kulan xujo dhab ah grand hore. Waxay ku tusaysaa yar robot ah in aad maamuli oo waa in aad u guurto ah oo ku saabsan deegaanka helitaanka alaabta iyo iyaga oo isticmaalaya si ay u xalliyaan xujooyinka. Waxa lagu sii diyaariyey addoonsada tan iyo markii ay sii daayo hordhac ah oo ka mid ah Google Play adeegyada Games la naqshadeynta wanaajiyey.
6. mashearulxaraam Valley
Mashearulxaraam Valley waa masterpiece ah. Waxay isticmaalaan luminously loogu talagalay xujooyinka loo isticmaalayo Dhagar joomateri waa in aad loo xaliyo si aad u hesho heerka ku xiga. Habka ugu heer kuwaas dheji, maroojin, rogrogmadaan, oo walaaq si wadajir ah ay u abuuraan kuwaas oo qaabab cusub run ahaantii waa wax aad leedahay si aad u aragto in ay si dhab ah shukriya. Taas ayaa ka dhigaysa mashearulxaraam Valley mid ka mid ah waa in ay leeyihiin kulan Android. Waxaa kaloo jira nooc ka mid ah line sheeko ku saabsan amiirad ah oo adduunka ah oo aan Noolayn. Waa aan Xad qoto dheer laakiin waxa ay u adeegtaa rabitaankiisa ah in la wado ciyaarta weeraryahanka. Waa wax badan oo ka mid ah ugu faraxsan yahay la arko dad badan ay mid ka mid ah kulamada ugu fiican.
7. Kingdom Rush (3 kulan)
Boqortooyada Rush waa in dadku ay dhab ahaantii qabteen ah iibsashada ciyaarta ka gaysashada. Waa ciyaar munaaraddii difaaca iyo mid ka mid ah inta ugu badan ee lagu qiimeeyo, kuwa ugu dhisnaa halkaas. Waxaa jira saddex kulan ee taxanahan ka mid yihiin Kingdom Rush, xayirin wax soohdima ah rush Kingdom, iyo Halka ay rush Kingdom. Ku dhawaad ​​saddex All isticmaalaan farsamo mid ah tan iyo markii ay yihiin ciyaaraha oo dhan difaaca munaaraddii. Waxay bilaabaan baxay fudud oo aad ka adag sidii aad horumar.
Waxay ciyaari naqshadeynta hufan, Sheeko wanaagsan, oo ku saabsan sida la xiriira sida aad u heli kartid si xirfad leh Final Fantasy Khiyaamo kale ah ee Android yihiin. Kulan waa arrin qaali oo eryan laga yaabaa in dadka qaar ka mid ah, laakiinse ay Dureeri Dhexdeeda waa kulan aan faa'iido cad marka ay timaado si qoto dheer iyo sheeko.
9. shan habeen ee Freddy ee 1, 2, iyo 3
Price: $2.99 kasta
Shan Habeenada ee Freddy ee gebogebada waa kulan farxaan in ay ku tiirsan yihiin si lama filaan ah ay u cabsi jiinis ka baxsan oo idinka mid ah. Wixii dhowr qof, ay u shaqayso iyo heshiiska hubaal ka mid ah kulan creepiest baxay jiro. Kii u horreeyey ayaa laba la baahiyay ee 2014 la siyaalaha cusub ee la sii daayay 2015 All saddex la yaabid fiican Google Play ratings Store, isagoo play farsamo ciyaar fudud.
11. ingriiska HD
Osmos HD waa ciyaar u badneyd. Marka aad eegto kaliya ee, aad aragto yar saxarka ah waa in uu u nuugo Faleen oo yar yar si ay u soo baxayso in ka wayn iyo, sidaas, nuugaan Faleen weyn ka qabtaan. In runta, halxidho this maskaxda si gaar ah u safrayaan waa labada cajiib ah iyo farax. Iyada oo music u daarmayaay'e iyo ciyaarta xawaaraha sinnayn play, aad si sax ah uga faa'iideysan karaan saacad on heerka saxda ah ka hor inta aadan ku garaacday oo wuxuu ku raaxaysan sannadka adduunka kasta waxaa ka mid ah. Waa waayo-aragnimo ciyaaraha runtii dhabayseen ka mid ahaa in aadan ka maqnaan.
Out Waxaa jira dhexjir ah ciyaarta badbaadada iyo ciyaar sim. Waxay keentaa qaar ka mid ah kulanka play aad exigent, Google ciyaaro kulan guulaha, saddex dhammaato kala duwan, iyo dhulka ah oo si dhab ah u kala oo xiiso leh. Waxaad ciyaaro sida ay cirmaaxe niyadiisa ka cryonics meel weyn oo immensity ee bannaan. Waxaad u adkeystaan, aad xoogga oxygen kor, oo u dhiska aad markabka halka la shisheeyaha kuwaas oo aan ku hadlin sida aad ku hadasho, laakiin aad ugu danbeyn bartaan inay la hadlaan sida ay sameeyaan wax looga qabto. Waxaa farxad leh, adag, iyo ciyaar in aad sii doonaa mashquul muddo ah.
Riptide GP2 ahaa mid ka mid ah daayo hore waa weyn ka dib markii ay sii daayo adeegyada Play Games Google. Sida oo kale waxa ay leedahay attainments, on-line multi-ciyaaryahan, iyo daruur badbaadiyay. Waxaa sidoo kale dhacda in ay mid ka mid ah ugu wanaagsan ee tartanka kulan Android. Waa hawl badan, waxa ay leedahay naqshadeynta grand, oo waa fikrad si cadaalad ah mala awaal ah kulanka tartanka ah.
14. Room 1 iyo 2
Price: $2.99 siday u kala horreeyaan
Room ayaa 1 iyo 2 waa labo kulan xujo bixiya waayo-aragnimo kala. Waxyaabaha ugu badan ee qolalka ugu jira xujooyinka gudaha xujooyinka ka dibna waxaa jira xujooyinka gudaha ah kuwa. Natiijo waa god xiiso bakayle ee xujooyinka in isagana si fudud ku boodbooda karaa.
15. dib Shadowrun iyo Shadowrun Dragonfall
Price: $2.99 iyo $6.99
Waxaa qoreysa qorshe RPG makaanikada ciyaarta style in awood laakiin waxa loo baahan yahay waxoogaa ee xariiqa qallooca waxbarasho. Ciyaarta ayaa ku dhowaad flawlessly Galiyo sare jecel yahay (laatiinta, iwm) xubno xubno Punk uumi si ay u abuuraan jawi aan caadi ahayn majiro. Labada of horyaal kuwani waa waa in la ciyaaray.
16. Star Wars: Knights Jamhuuriyadda Hore
Star Wars: Knights Jamhuuriyadda Hore (KOTOR) waa ciyaar qaaday in dunidu ay duufaan oo markii ugu horeysay waxaa la sii daayay ka badan 10 sano ka hor. Waxay kuu ogol yahay in ay farsameeyaan lagaga dhawaaqi jiray in ay saameeyeen lagu liitaa ee ciyaarta oo ha aad la ciyaareyso sida aad u doonayay oo weli aragti cusub waqti. Waxa uu gacan ka bilaabaan, miyigii oo ah in cimrigay maanta.
Terraria waa top ah ka bixisay kulankii android. Waxaa si weyn loo amaanay sida farsamada 2D Mine iyo mararka qaar in ay run tahay. Waxaad iga sahayda, wax farsamada, iyo waxyaabo badan oo kale farsamada Mine dilo iyo xitaa deegaanka multi-ciyaaryahan ee labada horyaal waxaa. Si kastaba ha ahaatee, sidoo kale waxaa ka mid ah dagaal Terraria Tababaraha kooxda iyo qaar ka mid ah muuqaalada kale oo dheeraad ah.
18. World of malax
World of malax ah waa mid ka mid ah kulan xujo ugu fiican. Kulankan waa in aad la dhiso qaab gaadho biibiile in ay nuugaan, malax dheeraadka ah. Si aad u hesho dhibcaha ugu badan, waa in aad isticmaasho dhaqaaqdo ka yar intii suurtogal ah si biibiile nuugayo ilaa malax ah u badan tahay. Waa xiiso leh oo si buuxda u maleeyay in uu huriyay.
19. XCOM: COL gudahood
XCOM: COL gudahood waa ciyaar istaraatijiyad in uu ahaa xarrunta Android ka PC ah. Waxaa soo bandhigay sawiro kuwa fog oo ka sii badan tahay celcelis ahaan mobile iyo sidoo kale xilli ciyaareedkan ciyaaryahanka dheer hal in uu leeyahay aad iska duulaankii shisheeye oo isticmaalaya farsamada istaraatijiyad style chess. Waxa kale oo jira on-line multi-ciyaaryahan, wax badan oo qalab iyo hub inay soo barbareyso ilaa kaa caawin in aad shaqada, waana dhab ah kaliya guud weyn aqoonta.
20. Baldur ee Gate, Baldur ee Gate II, iyo Icewind Dale
Price: $ 9.99 kasta
Waxaan saddexdaas kulan wada isugu keenaa, maxaa yeelay, way wada fasaxday sameeysa la mid ah (Beamdog). Waxay ciyaari sheekooyin aad u dheer la kulanka play adag, waana hubaal inay aad mashquul muddo bilo ah ku dul bilood.
Waxaa jira qaar ka mid ah dadka aan iska bixin karin kulan tayo wanaagsan leh qiimaha sare. Laakiin ma aha in aad ka walwasho oo dhan, maxaa yeelay, waxaannu idin keenaynaa ugu wanaagsan kulan xiiso leh oo lacag la'aan ah sida mushaarka Android oo hoos doonaa warka culus ee bixinta lacagta.
1. godxabsiga ugaadhsadaha 3 Maxkamadeyn Brave
Ugaadhsadaha godxabsiga 3 maxkamad Brave waxaa ciyaarta bixisay android lacag la'aan ah. Dagaalka ee guud ahaan dhinacyada sida aad u weeciyaan ciidamada sharnimadu Isladooda-waqtiga dhabta ah loogana faa'iidaysto. Shaashadda oo dhan adaa leh in la ogaado sida aad heshiis ka baxay sharafta leh xirfadaha cajiib ah. Dagaal-aragnimo Players sida marna ka hor la degtaa loogana faa'iidaysto, saamaynta qurux badan, naqshadeynta screen-gariir, iyo xidigaha halis ah. Tijaabi xirfadaha aad Boss Adduunka, maxkamadeeynta Party, ka Musaafurka, ayaa War, dhulka, iyo dad badan oo siyaabo farax dheeraad ah iyo codka bixinaya inuu u ciyaaro.
New Star Soccer waa isku xigxiga oo ka mid ah ciyaaraha kubadda cagta video daabacay New Star Games, kaas oo u ogolaanaya farsamada ciyaaryahanka iyo maarayn ciyaaryahan kubada cagta cusub, waxaana uu budges iyada oo saf ah oo ka mid ah horyaalada iyo xulka qaranka.
Brothers in Arms 3: Wiilashii War oo bilaabay juunyeerka oo la casriyeeyay kartaa ama u khaldan. Customization ee ciyaarta ayaa sii dheeraaday. Ciyaaryahanka beddeli karo oo loo hagaajiyo isaga / iyada hub si la isugu dheellitiro jidkooda ee ciyaarta ciyaarta. Arsenal Dheeriga ah sida qoryaha weerarka, hoobiyayaasha, qoryaha bastoolado toogte, shoodhgannadu iyo mindiyo waxaa laga iibsan karaa dukaanka. Qof Ciyaaryahanka ayaa si deeqsinimo ah inayna karaa guud ahaan heerka nidaamka duubo ah. Naqshadeynta ayaa wanaajiyey oo kasoo muuqday muuqaallada fiican. Ciyaarta ayaa sidoo kale tallaabada kooxda, taas oo ciyaartoyda amp kartaa xirfadahooda si ay u burburin lahaayeen madaafiic ka badan. Qaar ka mid ah ciidamada cadowgu isticmaalayo ah hawada anti waxaa laga heli karaa inta lagu jiro hawlgallada kooxda.
3D 4. Home Run Battle
Home Run Battle 3D xawilaadda tallaabo tignoolaji gacanta ku dadaalaysaa gudahood sanduuqa baytari ee. Players Uur fiidmeerta ku garaaceen shaashadda. Meel Hit ku dul dhisan goobta weerarka, Power tayada ciyaaryahanka, iyo tayada Contact Player ee. Sifooyin Kuwani waa la beddeli karaa iyadoo la beddelo qalabka qof ee.
Waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan kulan tartanka free abid. Kulankaan ayaa wuxuu ka kooban yahay boqolaal kuwan raadkaygay duurjoogta iyo Caalamka waalan buuxa ee stunts qabow la ton ee baaskiilada cajiib ah. Heli xiddiguhuna inay eryan heer cusub oo buuxi guulaha si aad u hesho baaskiilada cabsi badan oo lacag la'aan ah. A yar oo ka mid ah baaskiilada, ciyaarta dabaasha, booliska, naf baxay, super, aalladda, Halloween, Zombie, Ninja, ciidan, doofaar, Santa, iyo mahadnaqid iyo kuwa badan.
6. Lix Qoryaha: Gang wajahaya
Baro Wild West Frontier ah si sax ah u baaxad weyn oo u furan buuxa ee Cowboys, tuugada iyo more ... cadaawayaashaada aan dabiici ahayn in qofka Shooter ciyaar xiiso leh saddexaad. Qaado on 40 hawlgallada kala duwan wayn ee ayeey si aad u trounce. Waxaad tartami doonaa fardo, iska bixi tuug, weeciyaan hirarka cadaawayaashooda oo dheeraad ah oo jidka.
7. Asphalt 8: Air u dhashay
The ugu fiicnaa ciyaarta tartanka Mall Android xigxiga gaadho a dhibic qoqobada cusub. Buuxi oo firfircoon, xawaaraha sare ee stunts hawada ee xirfad darawalnimo xad-dhaaf ah ku shaqeeya oo ay ka physics engine brand-cusub. Waxaa jira 56-waxqabadka sare baabuurta (80% iyaga NEW! Of) iyo sare shati soo saarayaasha oo lagu daydo sida Bugatti Veyron, Lamborghini Veneno, Pagani Zonda R iyo Ferrari FXX.
8. u futay Commando
Sida hadda jira hal Commando ee weerar kaga tage ka dhanka ah daalim qallafsanaaday, aad dabin ku safka hore iyo ka-qaadista ku saabsan kaalmooyinka. Waa inaad isticmaashaa dhammaan xirfado gaar ah si ay u adkaysan weerar oo ka mid ah ciidamada necbaa oo cadaabana askari oo aad ku dhacay.
Gangstar Vegas waxaa ugu mushaarka badan ciyaarta android lacag la'aan ah. Kulankaan ayaa waxaa lagu ciyaaray sida dagaalka ee isku dhafan fanka legdinta in hab sheeko Lughaya. Waxaan u leeyihiin in ay sameeyaan naga dhex marayay 80 howlgallada ka buuxsamay dagaalka. Haddaba, waxaan u leeyihiin in ay ku dhisaan kooxda Burcad ah si ay ula wareegaan Vegas oo ku guulaysan dagaalladii maafiyada. Tani waa ciyaarta ugu faraxsan yahay mid aad u buuxa ee tijaabooyin kala duwan si ay u gaadho.
Aargoodigu 10. Commando
Waa mid ka mid ah hogaanka bixisay kulan android lacag la'aan ah. Kulankaan ayaa waxa uu sawiro 3D fiican. Waxay leedahay heerarka kala duwan ee dagaalka dhabta ah. Waxaa jira hub kala duwan ee ciyaarta inay la diriraan cadowgooda ugu.
> Resource > Emulator > Best 20 New Bixiyay Android Games Waa in aad isku daydo